Paul Merson wuxuu saadaaliyay doorka
Halyeeyga Arsenal Paul Merson ayaa saadaaliyay kooxaha ku dhamaan doona afarta ugu sareysa Premier League isagoo Liverpool ku riixaya inay ku dhameysato kaalinta ugu danbeysa ee Champions League ka hor Chelsea.
Manchester City ayaa haatan 10 dhibcood oo nadiif ah ku hogaamineysa horyaalka, Merson wuxuu sheegay in cidina aysan hor istaagi karin kooxda Pep Guardiola oo badisay 18 kulan oo isku xigta.
Deriska Manchester United ayaa ku jira kaalinta labaad, xiddigii hore ee Arsenal iyo England Merson ayaa aaminsan in Red Devils ay xilli ciyaareedka ku dhameysan doonaan kaalinta labaad halka Leicester City ay ku dhameysan doonaan kaalinta seddexaad.
West Ham, Chelsea iyo Liverpool ayaa haatan ku kala jira kaalmaha afraad, shanaad iyo lixaad sida ay u kala horeeyaan, laakiin Merson ayaa rajaynaya in West Ham ay dib u dhici doonto marka ay Liverpool ka hor timaado kooxda Thomas Tiuhel ee Chelsea tartanka Champions League.
Merson ayaa u sheegay Sky Sports: “Man City waxay ka mid tahay afarta ugu sareysa waana wax iska cad. Taas waxaa ka mid ah Manchester United iyo Leicester oo ah koox aad u fiican. Saddexda ugu sarreysa hadda way dhammaan doonaan sida ay aniga ila tahay.
“Marka waa adag tahay, waa wax aad u adag in xul xul ah finalka.
“Inkasta oo ay ku raaxeysanayaan xilli ciyaareed aad u wanaagsan, ma arko West Ham oo horumar sameyneysa, taas oo macnaheedu yahay inay u tartamayaan booskooda.
“Moye kooxdiisa waa mid aad u fiican, laakiin wixii aan ku arkay qeybtii labaad, ma rajeynayo inay sidan ku sii socdaan ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka.
“Everton ma ahan koox joogto ah marka Chelsea iyo Liverpool ayaa ku jira booska afaraad.
“Ma garanayo sababta laakiin waa inaan doortaa Liverpool, fadlan ha i weydiinin sababta laakiin wali waxaan kalsooni ku qabaa Jurgen Klopp iyo kooxdiisa.”
Saadaasha Paul Manson ee afarta sare:
By no means Do This If You Prefer Excellent Sleep, Say Well being